ဘဏ်နှင့်ယုံကြည်မှု Trust & Banking | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ဘဏ်နှင့်ယုံကြည်မှု Trust & Banking
ဘဏ်နှင့်ယုံကြည်မှု Trust & Banking
Posted by Ma Ma on Apr 6, 2016 in Business & Economics | 19 comments
ဘဏ်နှင့် ယုံကြည်မှု ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
Channel7မှာ လာနေတဲ့ မိသားစုပြိုင်ပွဲကလိုမျိုး ဘဏ် လို့ ပြောလိုက်ရင် ဘာကိုမြင်လဲလို့ မေးချင်မိတယ်။
ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်ဆံနေကြရတဲ့ ဘဏ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေခံအကျဆုံးအမြင်က ယုံကြည်စိတ်ချရမှုလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
= ဘဏ်တွေကို ငွေသွင်းတဲ့အခါ ငွေအတုပါလို့ဆိုပြီး ဖျက်ဆီးပစ်တာမျိုးကို ခံရဘူးသလို……..
= ဘဏ်တွေက ငွေထုတ်ယူတဲ့အခါမှာလည်း ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ ရေတွက်မယူဖြစ်ပဲ သုံးတဲ့အခါကျမှ ငွေလျော့နေတာမျိုးကိုလည်း ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
နောင် ငွေလက်ခံယူတဲ့အခါမှာ တစ်ရွက်ချင်းစစ်ဆေးပြီး အတုအစစ်ခွဲခြားရပါတယ်။
ဘဏ်ကထုတ်ယူတဲ့ ငွေအစည်းတွေမှာ စာရွက် (bank slip လို့ ခေါ်မယ်ထင်တယ်။) မကပ်ထားတဲ့ ငွေအစည်းတွေကချည်း လျော့တာဖြစ်နေပါတ
ဘဏ်တွေကို ငွေလျော့လို့ complaint တက်မယ်ဆိုရင် ငွေအစည်းမှာကပ်ထားတဲ့စာရွက်နဲ့ ပြောရတာမို့
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၃၁ရက်နေ့က မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်(အင်းလျားလမ်း) (MAB) တစ်ခုမှာ ထုတ်ယူခဲ့တဲ့ငွေကို ဘဏ်ချိန်မမီလို့ ဧပြီလ ၄ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် (သိရီမင်္ဂလာဈေးဟောင်းအနီးက) (မွေး/ရေ)မှာ သွားသွင်းတဲ့အခါ ………………..
၅၀၀၀တန် ဘဏ်စည်း၂စည်းက အရွက် ၉၀စီပဲ ရှိလို့ ၁သိန်းကျပ်တိတိ လျှော့တယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းကို စာရေးမလေးက ကိုယ့်ဆီကိုဖုံးဆက်လာတဲ့အခါ ဘဏ်မန်နေဂျာကို ခေါ်ပေးခိုင်းတော့ အမျိုးသားတစ်ဦး ဖုံးလာပြောပါတယ်။
အခုဖြစ်ပျက်တဲ့ကိစ္စမှာ MAB နဲ့ မွေး/ရေ ဘယ်ဘဏ်ကမှားမှန်းမသိလို့ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာကို ဘဏ်မန်နေဂျာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ပါ။
ကိုယ့်ဘက်က အကျိုးအကြောင်း သေသေချာချာပြောပြဖို့ ကြိုးစားချိန်မှာပဲ….
“အမနောက်ကွယ်ကနေ ပြောမနေနဲ့၊ ပြောချင်ရင် ဘဏ်ကို လာခဲ့လို့ “
ဘဏ်မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပြဿနာတစ်ခုမှာ Customer complaint ကိုတောင် နားမထောင်ပဲ မခြေမငံပြောသံကို ကြားလိုက်ရတော့ စိတ်အတော်ပျက်သွားမိတယ်။
“ကဲ ဒါဆိုလည်း လျှော့တဲ့ ငွေကို ပေးခိုင်းလိုက်တော့မယ်” လို့ ပြောတော့…….
“ပေးရမှာပေ့ါ။ အမတို့က လျှော့တာပဲ… ” ဆိုပြီး နောက်ဆက်ပြောနေသံတွေကို နားမထောင်တော့ပဲ ဖုံးချလိုက်ပါတယ်။
” လျှော့တဲ့ငွေကို ပေးသာ ပေးလိုက်တော့၊ အဲဒီမန်နေဂျာကြည့်ရတာ အသုံးကျတဲ့ပုံ မဟုတ်ဘူး။
သူပြောတဲ့စကားတွေက မန်နေဂျာပြောရမယ့် စကား မဟုတ်ဘူးလို့” ပြောလိုက်တယ်။
စိတ်ထဲမှာလည်း မကျေမချမ်းနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရင် ကောင်းမလဲလို့ တွေးနေမိတယ်။
နောက်နေ့မနက်မှာတော့ အလုပ်ပျက်ခံပြီး မွေး/ရေဘဏ်မန်နေဂျာဆီမှာ ငွေရေခန်းက CCTV ကို ပြန်ကြည့်ချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ
မနေ့က ငွေစစ်တဲ့ဝန်ထမ်းကပဲ လာပြီး ပြန်ပြပေးရင်းနဲ့ မနေ့ကကိစ္စမှာ သူတို့ကို မယုံသင်္ကာနဲ့ပြောတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုပြန်အပြစ်တင်ပါတယ်။
” ငွေလျော့ပြီဆိုကတည်းက ဘဏ်တစ်ခုခုမှာ မှားလို့သာ မဟုတ်ဘူးလား။
အမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းရမှာ မဟုတ်ဘူးလား” လို့ ပြန်ပြောပေမယ့်…
အပြန်အလှန် အခြေအတင် စကားများတာသာ အဖတ်တင်ခဲ့တယ်။
တင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာ အဲဒီဝန်ထမ်းကို ဘဏ်မန်နေဂျာက သူ့အလုပ်နေရာကို သွားဖို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
“ငွေအစည်းမှာ စာရွက်မပါတဲ့အတွက် ငွေထုတ်လာတဲ့ ဘဏ်ကိုလည်း ပြန်ပြောလို့ရမှာမှ မဟုတ်ဘူး” လို့ ဘဏ်မန်နေဂျာက ပြောလာပါတယ်။
“စာရွက်ပါပါ မပါပါ ငွေပြန်ရရ မရရ နောင်မဖြစ်ရအောင်၊ ပြုပြင်နိုင်အောင် ပြန်တော့ပြောရမှာပဲ” လို့ဆိုတဲ့အခါ ……..
“ငွေလျော့ကြောင်းတော့ ကျမတို့ဘဏ်ဘက်က သက်သေပြုပေးနိုင်ပါတယ်” တဲ့။
ပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဘဏ်မန်နေဂျာနဲ့ပြောခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက် တစ်ဖက်ဘဏ်ကို ပြန်ပြောခွင့်မရပဲ၊ ငွေ၁သိန်းကို အလဟဿ ဆုံးရှုံး ခံခဲ့ရပါတယ်။
နောက်တခါကြုံရတာကတော့ ဘုရင့်နောင် မွေး/ရေဘဏ် ချက်တစ်စောင်ကို ငွေထုတ်ပြီး
အဲဒီဘဏ်မှာပဲ ငွေလွှဲပို့ဖို့ ငွေပေးတာကို ၁၀၀၀ တန် အုပ်တစ်အုပ်က ၈၂ရွက်ပဲ ပါပြီး ၁၈၀၀၀ လျော့နေတယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။
ဒီဘဏ်ကထုတ်ပြီး ဒီမှာပဲ ပေးတာပါလို့ ပြောပေမယ့် ငွေအစည်းကစာရွက်က ကမ္ဘောဇဘဏ်စာရွက်ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီး ငွေလျော့တာကို လျှော်ရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ ငွေထုတ်ပေးတဲ့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းကို သွားခေါ်ပြီး သက်သေပြပြီး အခြေအတင်ပြောတဲ့အခါကျတော့မှ ဘဏ်ဝန်ထမ်းက လျှော်ရတော့မှာပဲလို့ ငြီးတွားပါတယ်။
အခုဖြစ်စဉ် ၂ခုကို သင်ခန်းစာယူရမယ်ဆိုရင်…….
၁။ ဘဏ်တွေက ငွေထုတ်တဲ့အခါ ရေတွက်မယူနိုင်ရင် ဘဏ်စည်းမှာကပ်ထားတဲ့စာရွက် ပါမပါ စစ်ဆေးပါ။
၂။ နောက်တဆင့်က ဘဏ်စည်းမှာကပ်ထားတဲ့ စာရွက်ကလည်း သူ့ဘဏ်စာရွက်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ့်လိုပဲ အခြားသူတွေ မနစ်နာ မဆုံးရှုံးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဘဏ်နာမည်တွေကို အမှန်အတိုင်း အပြည့်အစုံထည့်ရေးထားပါတယ်။
ဘဏ်မှာ ငွေသွင်းငွေထုတ်တွေ မလုပ်ဖူးပေမယ့် ဗဟုသုတ ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည် တီမမ။
စီဂျေ မမ ပါ ဟေ့။ :-)))
အခုဘဲ အစ်မဒုံ ရဲ့ ပဌာန်းပူဇော်နည်း သင်တန်း ကြော်ငြာကို ဓာတ်ပုံ နဲ့ တစ်ကွ တွေ လိုက်လို့ ဝမ်းမြောက်စွာဂုဏ်ယူပါကြောင်း ပြောပေးပါ ချစ်မမ။
ဖြစ်လာတဲ့ ကိုယ့်ဖောက်သည်ရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာထက် သူတို့ကို မယုံသင်္ကာနဲ့ပြောပါတယ်ဆိုပြီး ပြန်အပြစ်တင်နေတာ။
ကိုယ်ပြောတာကို နားထောင်ဖို့ဆိုတာထက် တစ်ခွန်းမှအပြောမခံပဲ အနိုင်ပြန်ပြောနေတာ။
အဲဒါငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ဘဏ်တစ်ခုရဲ့ လုပ်ရပ်လားးးးးးးးးး
အစ်မဒုံရဲ့ ထိုင်ဝမ်သင်တန်းပို့ချမှုတွေလည်း မျှော်လင့်တာထက်ပိုပြီး အဆင်ပြေ အောင်မြင်နေတာ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူစရာပါပဲ မလတ်ရေ။
ဖောက်သယ်တွေရဲ့ ယုံကြည် ကျေနပ်မှုကိုမယူပဲ ဖောက်သယ်တွေပြေးအောင် ဘလူးမျက်နှာဖုံး စွတ်ပြနေမှတော့
နောက်ခါ အဲဘဏ်တွေမှာ ငွေသွားမသွင်းစမ်းပါနဲ့ 
ဒီလိုနဲ့. စက္ကူအရွက်လိုက်ကြီးတွေအစား.. ချက်လက်မှတ်စနစ်ကို ပြောင်းလိုက်ကြတယ်လို့ပဲ.. ထင်ပါတယ်..။
ဒါမှမဟုတ်.. ဟိုဖက်ဘဏ်ကနေ ဒီဖက်ဘဏ်ကိုတန်းလွှဲတာမျိုးပေါ့….။
ယူအက်စ်မှာ.. ဒေါ်လာ၁ရာများ ကွာတယ်ပြောလို့ကတော့… သေနတ်နဲ့ထုတ်ပစ်ကုန်ကြမလားမသိ…။
ဒီမှာတော့ လေသေနတ်နဲ့ အပြန်အလှန်ပစ်ကြတာပဲ။ :p:
ကြော်ကတော့ အေတီအမ်စက်ကို တင်းသယ်… စင့်ဟာခေးမျှော်သလို ပိုပေးမလား စောင့်ပေမဲ တသပ်နဲ့တဂို တခါမှ ပိုမြဖူးဘူး… မြေအိုးဘဏ်….
မနေ့ကတင်… သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ATM စက်ထဲမှာ ကတ် ထွက်မလာပဲ ကျန်နေခဲ့လို့တဲ့…
အဲ့ဒီ ပြသနာကို ဆိုင်ရာ ဘဏ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ပေးမလဲ…မေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကို
ဘဏ်က ဖုန်းထဲကနေ… တာဝန် မယူနိုင်ဘူး ဆိုပြီး ပြောလို့တဲ့…
ကျနော့် သူငယ်ချင်းတော့ အတော် ပေါက်ကွဲနေလေရဲ့။
ကျနော့်ဆီ… အကျိုးအကြောင်း လှမ်းပြောပြီး.. သတင်းမီဒီယာကနေ…အဲ့ဘဏ် ဝန်ဆောင်မှု ညံ့ကြောင်း
အများသိအောင် လုပ်ပေးပါ လို့တောင် လာပြောနေလို့… ။
တစ်ဖက်က ပြောတဲ့ အသံကို မှတ်ထမ်းယူ ဖမ်းထားပါ လို့.. ပြောလိုက်တယ်။
ဘာ ဆက်ဖြစ်မယ်တော့ မသိသေး။
ဗမာပြည်က ဘဏ်တွေ စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့… မျှော်လင့်နေရတုန်းပဲ…။
ATM ထဲကဒ်ကျန်တာတော့ မဖြစ်ဖူးသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ထုတ်တဲ့ငွေက ထွက်မလာဘဲ ကဒ်ထဲမှာ ဖြတ်သွားတာမျိုး ကြုံဖူးတယ်။ ငွေထွက်မလာလို့ အခြား ATM စက်မှာ သွားထည့်ပြီး ထုတ်တော့ ထုတ်လို့မရလို့ လက်ကျန်စစ်လိုက်တော့မှ ကိုယ့်ငွေ အဖြတ်ခံလိုက်ရမှန်းသိတယ်။ သောကြာနေ့ညနေပိုင်း ဆိုတော့ ဘဏ်ကိုလည်း ဖုန်းဆက်လို့မရတော့..တနင်္လာနေ့အထိစောင့်ပြီး ဖုန်းဆက်ရတယ်။ အဲဒီဘက်ကနေ ဘယ်မှာထုတ်တာလဲ။ ဘယ်အချိန်လဲမေး။ သူတို့ဘက်က ATM စက်ထဲက Cash Amount ပြန်စစ်လို့ ပိုရင် ပြန်ထည့်ပေးပါ့မယ်တဲ့။ ၃ရက်လောက်စောင့်မှ ငွေပြန်ရတော့တယ်။ (တကယ်လို့များ ATM စက်ထဲမှာ စာရင်းမပိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ မသိ။) ဒါတောင် အရင်ဆုံး မူရင်းဘဏ်ရဲ့ ATM စက်မှာထုတ်မိလို့။ အခြားဘဏ်တွေရဲ့ စက်မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီထက်ကြာမယ်ထင်တယ်။
ပထမတော့ ပြောကြဆိုကြတာတွေကို အသံဖမ်းအုံးမလို့။
မသိအောင် မဟုတ်ပဲ ပေါ်တင်ပြောပြီး ဖမ်းမယ်လို့ သွားတာ။
ဘဏ်ဝန်ထမ်းနဲ့ စကားပြောရင်း ဒေါသထွက်ရင်း အသံဖမ်းဖို့ မေ့သွားတယ်။
ငွေ(စက္ကူ) များများကိုင်ရတဲ့၊ ငွေ ကိုင် များတဲ့ ဒုက္ခတွေပေါ့ ချစ်မ ရေ။
နောင်ဆိုရင် တော့ စာရင်း to စာရင်း နဲ့…
လူကိုယ်တိုင် ငွေသွင်းငွေထုတ် လုပ်စရာ မလိုတော့အောင် ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်ပါရဲ့။
စံနစ်ကြောင့် မဟုတ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ စာရင်း to စာရင်းမှာလည်း ဘယ်ပြသနာမျိုး လာမလဲ မသိ။
မျှော်လင့်တာတွေများလွန်းလို့ လုပ်ပေးမယ့်သူကို အားနာပြီး ဖြစ်လာမှသာလို့ပဲ……….
ငွေကို ရေရတာ အဆင်မပြေလို့ ဂရမ်ချိန်ခွင်နဲ့ အလေးချိန်စစ်ဖို့စဉ်းစားပြီး စမ်းကြည့်ဖူးတယ် ။ အဆင်မပြေဘူး။ မှိုတက်နေရင် အလေးချိန်တွေက တော်တော်ကွာတယ်။ အခုငွေလျော့တဲ့ပုံစံက အောက်ခြေဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်စားနေပုံရတယ်။ ဒီလိုအရွက်လျှော့တယ်ဆိုဘယ်လိုနေရာဘယ်လိုအချိန်မှာ ဘယ်လိုနေရာမှာ လျှော့လဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ ငွေကိုရေတွက်လက်ခံတုန်းကတော့ အရွက်ပြည့်လက်ခံမှာပဲ။ လျော့အောင်ဆို တမင်သက်သက်ပြန်လျော့ရမယ်။ အောက်ခြေမှာ ဝေစားမျှစားလုပ်နေရင်တော့ ဖမ်းမိဖို့မလွယ်ဘူး။
ဘဏ်မှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် တာန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ အနဲဆုံးတော့ ဖြစ်ပျက်ပုံကို တိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားသင့်တယ်။
ကျုပ်သူငယ်ချင်း ဘဏ်တစ်ခုက ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ခါတုန်းက ပြောဖူးတဲ့စကားကို ပြန်သတိရမိတယ်..
ငွေသွင်းငွေထုတ် ကောင်တာတွေမှာ တနည်းနည်းနဲ့ လျော့နည်းဆုံးရှုံးတာမျိုး အမြဲ ဖြစ်နိုင်သတဲ့..
ဒါကြောင့် သူတို့ဘဏ်ကတော့ ကောင်တာဝန်ထမ်းတွေကို Tip ပေးတာကို လက်ခံခိုင်းတယ်။ လိုတာကို အဲဒီက စုပြီးလျော်တယ်ပေါ့…
ခက်တာက အခုနောက်ပိုင်း Tip ပေးတာ မရှိသလောက်နည်းသွားပြီ..
ဘဏ်နာမည်မပျက်ချင်ရင် ငွေသွင်းကောင်တာကငွေကို ငွေထုတ်ကောင်တာမှာ တိုက်ရိုက်ပြန်မပေးရအောင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်..
ဒါ.. သူတို့ ဘဏ်သမားတွေ သိပါတယ်…
အခုကိစ္စမှာ စိတ်ထဲမကျေလည်တာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။
ဒါပေမယ့် အလုပ်ပျက်မှာနဲ့ အကျိုးမဲ့မှာနဲ့ တန်မတန် ချိန်ဆနေတာ။
ဘဏ်ဆိုတာ ဘာလည်း လို့ သိခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာလေးတခု။
တောင်ငူမှာတာဝန်ကျတုံး တိုင်းမှုးအမိန့်နဲ့ ပဲခူးတခွင် တည်ဆောက်ပြုပြင်တွေ လုပ်ပေးခဲ့ရတုံးက။
ဘဏ်စာအုပ်တခုက ငွေကို ထုတ်
ဒီဘက်ငွေထုတ်ကောင်တာက ရေတွက် ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံထုပ်ကို
ဘေးခြင်းကပ်နေတဲ့ ငွေသွင်း ကောင်တာက
ကောင်းလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာကို အချိန်တနာရီလောက် မတ်တပ်စောင့်ရင်း သင်ယူခဲ့ရဘူးပါကြောင်းးးး။
အချို့ဘဏ်တွေဟာ ကာစတန်မာကြီးကြီးတွေကိုပဲ ချိုသာတယ်။